नेपालमा एकैदिन ७६ जनाकाे काेराेना परीक्षण, सबैकाे नतिजा नेगेटिभ (भिडियाेसहित) – खबर खुराक
Home > मुख्य समाचार > नेपालमा एकैदिन ७६ जनाकाे काेराेना परीक्षण, सबैकाे नतिजा नेगेटिभ (भिडियाेसहित)
नेपालमा एकैदिन ७६ जनाकाे काेराेना परीक्षण, सबैकाे नतिजा नेगेटिभ (भिडियाेसहित)
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २०:३३
काठमाडौं, १७ चैत। नेपालमा पछिल्लाे समय काेराेना भाइरसकाे आशंकामा आइसाेलेसनमा रखेर उपचार गरिएका बिरामीहरूकाे मृत्यु क्रम बढेपछि त्रासकाे वातावरण बनेकाे छ ।
आइतबार बुटवालमा आइसाेलेसनमा उपचाररत युवाकाे मृत्यु भएपछि काेराेनाकै कारण मृत्यु भएकाे हुनसक्ने भनेर स्थानीयमा एककिसिमकाे त्रास पैदा भएकाे थियाे । तर मृतककाे नमुना परीक्षण क्रममा उनमा काेराेना संक्रमण नरहेकाे पाइएकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
यसैगरी साेमबार मात्र काठमाडाैंमा ३ जनाकाे आइसाेलेसनमा उपचार गराइरहेकै अवस्थामा मृत्यु भयाे । काेराेना आशंकामा उपचार भइरहेकाहरूकाे मृत्यु भएपछि त्रास बढ्नु स्वाभाविकै भए पनि परीक्षण रिपाेर्ट नआउन्जेल त्रसित बन्नु नपर्ने बताउँछन्- स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकाेटा ।
साेमबार पाटन र वीर अस्पतालमा निधन भएका ३ जनाकै नमुना संकलन गरी जाँच सुरु गरिएकाे देवकाेटाले बताए । साेमबार फेसबुक लाइभमार्फत काेराेनासम्बन्धी अपडेटेड विवरण दिँदै प्रवक्ता डा. देवकोटाले परीक्षण रिपोर्ट आएपछि साेबारेमा जानकारी दिइने बताए ।
उनले भने– ‘वीरमा निधन भएकामध्ये १ जना ज्‍वराेसहित ब्लडप्रेसर र डायबिटिजका बिरामी तथा अर्का ज्‍वराेका बिरामी रहेको पाइएको छ, दुवैको थ्रोट स्वाब परीक्षण हुँदै छ ।’ यसैगरी उनले बुटवलमा आइसोलेसनमा मृत्यु भएको व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएको पनि जानकारी गराए ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जारी
मिडिया ब्रिफिङमार्फत प्रवक्ता डा. देवकोटाले कोरोना भाइरसको पोजिटिभ केस आएकाहरुको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भइरहेको जानकारी गराए ।
उपचारमा रहेका ४ जना संक्रमितले भेटेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने काम भइरहेको बताउँदै नजिकका परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुका हालसम्म गरिएको परीक्षण नेगेटिभ आएको उनले जनाए ।
विदेशबाट आएका ४१ हजार १ सय ४४ जना नेपाली नागरिकको ट्रेसिङ गरिएको उनले जानकारी दिए ।
चीनबाट ल्याएका मेसिनकाे टेस्‍ट भइसक्याे
चीनबाट ल्याइएका मेसिनकाे टेस्‍ट भइसकेकाे बताउँदै प्रवक्ता डा. देवकोटाले ती स्वास्थ्य सामग्री प्रदेशमा वितरण समेत सुरु भएको बताए । उनका अनुसार आजै सुर्खेत र विराटनगरमा विमानबाट मास्क र पिपिईलगायतका सामान पठाइएको छ भने अन्य प्रदेशमा गाडीमार्फत सामान पठाइने छ ।
चीनबाट ल्याएका मेसिनबाट धनगढी, बुटवल र विराटनगरमा कोरोना परीक्षण सुरु गरिएकाे देवकोटाले बताए ।
देशभरमा ९३ जना आइसाेलेसनमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरमा ९३ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेकाे जनाएकाे छ । प्रवक्ता डा देवकोटाले प्रदेशहरुबाट हालसम्म २ सय १७ जनाको कोरोना भाइरसकाे संक्रमण भए/नभएकाे परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको जानकारी दिए । तीमध्ये केहीको परीक्षण भई रिपाेर्ट आइसकेको र केहीको आउने क्रममा रहेकाे उनले बताए ।
साेमबार एकैदिन ७६ जनाकाे परीक्षण
कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएकाे पुष्टि गर्न नमुना परीक्षण गर्ने क्रममा सोमबार एकैदिन ७६ जनाको परीक्षण गरिएकाे सरकारले जनाएकाे छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे तथ्यांकअनुसार सोमबार परीक्षण गरिएका सबैकाे नतिजा नेगेटिभ आएकाे छ । नेपालमा साेमबारसम्म ९ सय ९३ जनाकाे परीक्षण गरिएकामा ९ सय ८८ जनाकाे नतिजा नेगेटिभ आएकाे छ भने ५ जनामा काेराेना संक्रमण पाेजेटिभ देखिएकाे छ ।
५ जना संक्रमितमध्ये सुरुमा संक्रमित भएका १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने ४ जनाको उपचार जारी छ ।
प्रकाशित मिति: १७ चैत्र २०७६, सोमबार २०:३३
Posted in मुख्य समाचार, समाजTagged कोभिड १९
Previous: आजमात्रै ७६ जनाको कोरोना परीक्षण, रिपोर्ट आउन बाँकी
Next: कोरोना भाइरसः सोमबार मात्रै स्पेनमा ९१३, इटालीमा ८१२ जनाको मृत्यु